जब यात्रुले जहाजलाई धकेल्न थाले… बस् बाँच्न पर्छ के के देखिन्छ के के !
December 1, 2021 N88LeaveaComment on जब यात्रुले जहाजलाई धकेल्न थाले… बस् बाँच्न पर्छ के के देखिन्छ के के !
काठमाडौं । चारपाङ्ग्रे हलुका सवारी मानिसहरुले धकेलेको त तपाईं हामीले देखेका छौं । तर बुधबार बाजुरा विमानस्थलमा फरक दृश्य देखियो, जहाँ यात्रुहरुले तारा एयरको एउटा जहाज धकेलेका थिए । तारा एयर यति एयरलाइन्सको भगिनी कम्पनी हो । यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाका अनुसार हुम्लाको सिमकोटबाट ९ एन–एभीई जहाज बाजुरा विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । जहाज […]
‘राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गरेकोमा सीपीजीलाई बधाई छ’
December 1, 2021 N88LeaveaComment on ‘राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गरेकोमा सीपीजीलाई बधाई छ’
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई राप्रपाको अध्यक्ष हुन लागेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महासचिव मैनालीले राजा महेन्द्र राष्ट्रवादी र प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको परिवर्तन राष्ट्रवादी नभएको बताएपछि प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । प्रचण्डले भने, ‘पहिला राजतन्त्र […]
December 1, 2021 N88LeaveaComment on आगामी तीन दिन हिमपातको सम्भावना
काठमाडाैं । नेपालमा पश्चिमी वायुसँगै न्यूनचापीय प्रणाली (पश्चिमी ट्रफ) र अरब सागरमा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्र (कम दबाब प्रणाली) को प्रभावले आगामी तीन दिन हिमपातको सम्भावना देखिएको छ । जल तथा मौसाम विज्ञान विभागले एक विशेष बुलेटिन निकालेर उक्त प्रणालीका कारण आज बेलुकादेखि देशका सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र वाग्मती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भ–ूभागका […]
पेट्रोलको मूल्यमा ८ रुपैयाँ घटाइयो, आजै रातिदेखि लागू हुने
December 1, 2021 N88LeaveaComment on पेट्रोलको मूल्यमा ८ रुपैयाँ घटाइयो, आजै रातिदेखि लागू हुने
नयाँदिल्ली । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको चपेटामा विभिन्न देशका सर्वसाधारण गर्छन् । मूल्यवृद्धिको कुनै भौगोलिकस सीमा देखिँदैन तर कतिपय सरकारहरूले जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम लागू गर्छन् । भारतको नयाँदिल्ली प्रदेश सरकारले जनतालाई राहत दिन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ भ्याट घटाएको छ । सरकारले लिने भ्याट (कर) घटाउँदा यसको प्रत्यक्ष सुविधा जनतालाई पर्नेछ । भ्याट बढी हुँदा […]
‘चिना होइन भावना मिलाएर विवाह गर्नुपर्छ’
December 1, 2021 December 1, 2021 N88LeaveaComment on ‘चिना होइन भावना मिलाएर विवाह गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । मंसिर विवाहको महिना हो । यस महिनामा धेरै युवायुवतीले वैवाहिक जीवनको यात्रा शुरु गर्छन् । दाम्पत्य जीवनको शुरुवात आफैंमा नौलो अनुभव पनि हो । संसारमा विभिन्न तरिकाले विवाह गर्ने प्रचलन छ । नेपाली समाजमा मुख्यतः दुई प्रकारले युवायुवती विवाह बन्धनमा बाँधिने गर्छन्, मागी विवाह र प्रेम विवाह । अहिले प्रेमपछि घरपरिवारमा मागेर विवाह […]
यी हुन् राष्ट्र’घा’ती नेताहरू
December 1, 2021 N88LeaveaComment on यी हुन् राष्ट्र’घा’ती नेताहरू
काठमाडौंँ । छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको असल सम्बन्ध र सहकार्यविना कुनै पनि देश अगाडी बढ्न सक्दैन । छिमेकी राष्ट्रबीच पारस्परिक हित र लाभ तथा विकासका लागि समय समयमा विभिन्न किसिमका सन्धि, सम्झौताहरू हुनु जरुरी छ र हुने गरेका पनि छन् । ती सन्धि सम्झौताहरूको पालना गराउन सम्बन्धित राष्ट्रहरूको अनिवार्य दायित्व हो तर भारत र नेपालबीच भएका कुनै […]
भिम रावल र भुसालका कारण एमालेको लोकतान्त्रिक साख जोगियो
December 1, 2021 N88LeaveaComment on भिम रावल र भुसालका कारण एमालेको लोकतान्त्रिक साख जोगियो
कृष्ण पोखरेल एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले मुख्यतया दुई, तीन वटा सन्देश दिन खोजेको छ । पहिलो कुरो त उद्घाटन सत्रमा व्यापक जनपरिचालन गरेर जुन सभा गरियो त्यसबाट एमालेसँग अहिले पनि व्यापक जनसमर्थन छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ । दोस्रो सन्देश भनेको विभाजनका बावजुद एमाले सशक्त छ भन्ने हो । तेस्रो सन्देश भनेको निर्वाचन भयो भने […]
केजरीवालको कमाल, दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य घटाए
December 1, 2021 N88LeaveaComment on केजरीवालको कमाल, दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य घटाए
दिल्ली । भारतको दिल्ली सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ भारतीय रुपैयाँ घटाएको छ । मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले पेट्रोलमा लाग्ने भ्याट ३० प्रशितबाट घटाएर १९ दशमलव ४० प्रतिशत कायम गरेका छन् । यसबाट दिल्लीमा पेट्रोलको भाउ १०० भारुभन्दा कम भएको छ । यसअघि पेट्रोलको मूल्य १०४ भारु थियो । मुख्यमन्त्री केजरीवालको अध्यक्षतामा बसेको क्याबिनेट वैठकले यो निर्णय […]
लालबाबु पण्डित एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्ने तयारीमा
December 1, 2021 N88LeaveaComment on लालबाबु पण्डित एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्ने तयारीमा
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितले चितवनमा जारी १० औँ महाधिवेशनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।उनले महाधिवेशनबाट असन्तुष्ट बन्दै नेकपा एमालेको सबै कार्यकारी पदबाट विदा लिने घोषणासमेत गरेका छन् । एमालेको सबै कार्यकारी पदबाट विदा लिने औपचारिक घोषणासहित उनी महाधिवेशन स्थल चितवनबाट काठमाडौं फर्किसकेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत नै एमालेको १० औँ महाधिवेशनमा […]
जाँदाजाँदै भीम रावलले भने – अब के गर्ने, भोलिदेखि सोचौंला
December 1, 2021 December 1, 2021 N88LeaveaComment on जाँदाजाँदै भीम रावलले भने – अब के गर्ने, भोलिदेखि सोचौंला
चितवन । एमालेमा अध्यक्ष पदका प्रत्याशी भएर पराजित बनेका भीम रावलले केन्द्रीय सदस्य बस्न अस्वीकार गरेका छन् । मत परिणाम आउनु अगाडि नै उनले आफू अध्यक्ष हारेमा पार्टीका कुनै पनि कमिटीमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । चुनावी परिणामले भने रावललाई केन्द्रीय सदस्यमा विजयी गराएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेका ३०१ केन्द्रीय सदस्यको […]